कसरी बन्छ बिस्कुट ? (फोटो सहित) | karnalikhabar.com
कसरी बन्छ बिस्कुट ? (फोटो सहित) – karnalikhabar.com
कसरी बन्छ बिस्कुट ? (फोटो सहित)
प्रकाशित मिति :2016-12-27 22:38:07 नेपालमा अहिले ठूला ५ वटा बिस्कुट उद्योग संचालनमा छन्। साना बिस्कुट उद्योग भने डेढ दर्जनको हाराहारीमा छन्। पिठोबाट बन्ने बिस्कुटमा चिनी, ध्यु, तेल, नुन लगायतका पदार्थ मिसाइन्छ। कसरी बनाइन्छ त ?बिस्कुट भन्दै हामी विराटनगर दुहवीस्थित एसियन फुड एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालिमा पुगेका छौं ।
विस्कुट बनाउन मैदा,चिनी,ध्यु, सिरप,ग्लुकोज,दुधका साथै अन्य रसायनहरु चाहिन्छ। जसको सुरुवात प्रि मिक्सिङ सेक्सनबाट हुन्छ। जुन सेक्सनमा रहेको कम्प्युटरराइज्ड सिस्टमले उत्पादन अनुसारको मेटिरियल तयार पार्छ।
जुन मेटेरियल तयार भएपछि पिएलसी मेशिनले तयार भएको सूचना दिन्छ। प्रत्येक सिस्टमको बटम थिच्नासाथ पालैपालो गरेर सबै मेटिरियल क्रिमर मेशिनमा आफैँ आउँछ।
क्रिमर मेशिनले क्रिमिङको प्रक्रिया गरेपछि मिक्सर मेशिनमा क्रिम तयारी अवस्थामा रहेको बत्ति बल्छ । त्यसपछि बटम थिच्दा तयार क्रिम मिक्सिङ मेशिनमा जान्छ।
त्यसैगरी मैदा सिस्टमले मैदा छानेर आवश्यक तौलको मैदा तयार पार्छ । तयार भएछि सूचना दिन्छ । रेडि लाइट बल्छ जुन बटम थिचेपछि अटोमेटिक सिस्टमबाट मैदा क्रिम भएको मिक्सिङ मेशिनमा जान्छ।
मिक्सिङ मेशिनले सम्पूर्ण कच्चा पदार्थलाई मुछेर काँचो बिस्कुट अथवा ‘डो’ बनाउँछ। यसपछि अगाडिको प्रक्रियाको लागि अगाडि पठाउछ। यो मेशिनले प्रतिघण्टा ४ सय किलोका ४ वटा ब्याच तयार पार्ने एसियन फुड एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालिका जनरल म्यानेजर महेश साहले जानकारी दिए।
‘त्यसरी तयार भएको मेटिरियल कोर्स गेज रोलरमा पुग्छ भने त्यसलाई सो मेसिनले अझै फाइन गर्ने काम गर्छ । त्यसपछि लेमिनेटर मेशिनले बिस्कुटको लेयर बनाउने काम गर्छ,’ साहले भने ।
साहका अनुसार लेमिनेटरबाट ४ स्टेप गेज सिटिङ मेशिनमा पिठो पुगेपछि बल्ल चाहिने थिकनेसको सिट बन्छ र त्यसपछि कुन आकारमा बिस्कुट बनाउने हो, सो चयन गर्नुपर्छ । त्यसपछि रोटरी कटिङ मेसिनले विस्कुटको आकारमा काट्छ।
त्यसपछि आकार लिइसकेको विस्कुट साल्ट, सुगर, स्प्रेकल मेसिनमा पुगेपछि नुन र चिनी के हाल्नु पर्ने हो हालिन्छ। अव बिस्कुटलाई पकाउनका लागि पकाउने मेसिनमा हालिन्छ । कति तापक्रममा विस्कुट पकाउने हो सोही तापक्रम पहिला नै सेट गरिएको हुन्छ। ६ वटा हिटिङ जोन पार गरेपछि पूर्ण रुपमा विस्कुट तयार हुन्छ। यसरी विस्कुट तयार हुन बढीमा २५ मिनेट लाग्छ। यो समय मिक्सिङदेखि माइक्रो ओभनसम्मको हुन्छ।
पाकेर आएको खुख्खा बिस्कुटलाई आयल स्प्रे मेसिनमा हालिन्छ र तेल, मेसिनले नै बिस्कुटमा हाल्छ। त्यसपछि म्यानुअल रुपमा विस्कुट प्याक गर्नका लागि प्याकिङ मेसिनमा हालिन्छ। विस्कुटलाई र्‍याप गरी प्याकेट बनाउने काम भने मेसिनले गर्छ ।
साहले आफ्नो कम्पनीले उत्पादन गरेको विस्कुट विश्वस्तरको मापदण्ड अनुसार बनाइएको दाबी गरे। वल्ड हाइटेक इक्युपमेन्ट प्लाट आफूहरुसँग रहेको भन्दै उनले यस्तो प्लान्ट नेपालका अरु विस्कुट उद्योगहरुसँग नभएको दाबी गरे। विश्वको लेटेस्ट प्रविधि अनुसार आफूले विस्कुट उत्पादन गरेको भन्दै उनले गुणस्तरका विषयमा कसैसँग सम्झौता नगरिएको उनले बताए।
फुल्ली इक्युपेड आरएनडि एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल ल्याव अनुसार विस्कुट बनाइएको साहले दाबी गरे । उनका अनुसार यो प्रविधि भित्र्याउने एसियन बिस्कुट पहिलो कम्पनी हो । सबै टेष्ट आफ्नै ल्यावले गरेपछि मात्र कम्पनीले विस्कुट उत्पादन गर्ने गरेको छ।
कम्पनी आइएसओ २२०००, २००५ बाट सर्टिफाइड भएको भन्दै उनले यो नै सर्टिफाइड हुने पहिलो कम्पनी भएको दाबी गरे। एसियन फुडले अहिले २५ प्रकारका विस्कुट उत्पादन गरिरहेको छ। ग्लुकोज, क्रिम, मारी र साल्ट एण्ड स्वीट प्रकार उत्पादन एसियन फुडको मुख्य उत्पादन हो । प्रतिदिन ३० टन उत्पादन क्षमता रहेको सो कम्पनीमा ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जनरल म्यानेजर साह विस्कुटबारे सेतोपाटीलाई कारखाना परिसर भित्र जानकारी दिदैँ।
६३ वर्षकी कालिकादेवी कक्षा ८ को परीक्षा दिँदै, मेयर या उपमेयरमा चुनाव लड्ने
अब ६ वर्षमै सकिन्छ १० कक्षासम्म पढाइ !